Nkwụghachi ụgwọ mmekọrịta ọha na eze: Nye ndị ahịa gị ụgwọ mgbe ha kesara | Martech Zone
Otutu mmadu na enye ego ma nye gi inweta ndi ahia ohuru. Nke a bụ ezigbo nzuzu mgbe ị na-eche banyere ya, kedu maka ndị ahịa na-akwụghachi ụgwọ na-emefu ego? N'ezie, gịnị banyere ndị na-akwụghachi ụgwọ ọrụ ndị na-ekerịta eziokwu ahụ bụ na ha zụtara n'aka gị na netwọkụ mmekọrịta ha?
Ugbu a na-enyocha ihe karịrị 30% ọnụego mgbanwe, Ntinye ego bụ ihe na-egbuke egbuke. Ọ bụghị naanị na ị na-eji okwu ọnụ ahịa, ị na-enyekwa ihe mkpali iji kwụghachi ndị ahịa kachasị mma na na-enye ha ego iji laghachite ma mee ihe ọzọ zuo! Nke a bụ ụwa kachasị mma!
Hụ ndị ahịa gị ka ha kesaa akara gị na Facebook, Twitter, Google+, Pinterest na LinkedIn iji nweta ego nzụta ha ugbu a dabere na okporo ụzọ ha wetara gị. A na-etinye ozi gị n'otu ntabi anya, nri, na mbadamba ndị enyi ha - ọ bụghị dịka mgbasa ozi weebụ dị ala, kama dị ka isiokwu ndị na-ewu ewu na-ahụkarị ma na-agụ.
Mgbe ị na-achọpụta, a na-enye ndị ahịa gị nhọrọ ị ga-enweta pasent kpebisiri ike site na nzụta ha ugbu a mgbe ha kekọrịta ahịa gị na netwọkụ mmekọrịta kachasị amasị ha. Ha nwere ike irite ego ozigbo ozigbo maka izipu ozi - wee rite karịa karịa mgbe ndị enyi ha pịa gị njikọ gị.
Nke kachasị mma, Ntinye ego bụ ihe ọghọm. Enweghị ụgwọ ịwụnye ngwanrọ ahụ ma ha na-akwụ ụgwọ naanị mgbe ha nyefere ndị ahịa ọhụrụ. Ego Social Rebate bụ 15% nke nkwụghachi azụ ndị ahịa gị kwuru. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ n ’inye $ 10.00 na nkwụghachi ụgwọ, ụgwọ ọrụ ọrụ Social Rebate ga-abụ $ 1.50. Nke a na-ekpuchi azụmahịa niile, nhazi, na ụgwọ nnyefe.
Tags: mkpalinkwụghachiazụmahịa azụmahịacoupon mmekọrịtaecommerce mmadụmmeghachi mmekọrịta mmadụ na ibe yaokwu onu
Uru nke ozi email kpalitere